झींगाको साथ क्रीमी भात | ThermoRecines
झींगाको साथ क्रीमयुक्त चामल
चामल40 मिनेट4 व्यक्ति350२ क्यालोरी
सप्तान्तमा मलाई गर्न मन पर्छ चामल, किनकि धानको बारेमा सब भन्दा राम्रो चीज यो क्षणमा यसलाई खानु हो। र यो यो छ कि थर्मोमिक्सको साथ, चामल अनौंठो आउँछ। आज म बजारमा गएको थिएँ र मैले अफरमा केही स्वादिष्ट झींगा देखेको थिएँ, त्यसैले निर्णय सजिलो थियो। झींगा संग मलाई क्रीमी भात। र पहिले, हामीले एउटा लिएका छौं फूलगोभी क्रिम, यो चिसो संग कस्तो राम्रो महसुस।
मैले प्रयोग गरेको छु झींगा, तर तपाईं झींगा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ वा यदि तिनीहरू राम्रो मूल्य हो भने। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईं तिनीहरूलाई कच्चा किन्नुहोस् किनकि हामी गोबरहरूको फाइदा लिन चाहन्छौं एक बनाउन fumet।
1 झींगाको साथ क्रीमयुक्त चामल
स्वादिष्ट चावल, होममेड झींगा स्टकको साथ बनाईएको र नुन फ्लेक्सको साथ ग्रिल गरिएको झींगासँगै। दोस्रो पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
टमाटरको 80 ग्राम
१०० ग्राम अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
750०g स्टॉक (झिंगा कोठा, पानी र ive० ग्राम जैतूनको तेल)
केसरको केहि थ्रेडहरू वा खाना रंगको १/२ चम्मच
हामी झींगालाई छल्छौं र टाउको र खोलहरू शीशामा थप्छौं। Gr० ग्रियन जैतूनको तेल र फ्राई थप्नुहोस् २ मिनेट, वेग १, भेरोमा तापमान।
हामी 900 ग्राम पानी, नुन र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, तापमान º ० डिग्री, गति २।
हामी स्ट्रेनरको साथ धेरै राम्रोसँग निकास गर्छौं, स्टक आरक्षित गर्छौं र शीशा सफा गर्छौं।
हामीले टमाटरलाई गिलास, प्याज, लसुन र pra झींगाको शरीरमा राख्यौं र हामी प्रोग्राम गर्दछौं Seconds सेकेन्ड, वेग sh को लागी गति।
तेल र फ्राई थप्नुहोस् १० मिनेट, वरोमा तापमान, चम्चा गति।
पपरिका र चामल र साउटी, प्रोग्रामिंग थप्नुहोस् Minutes मिनेट, Varoma अस्थायी, गति १, बाँया पालो।
माछाको स्टक, नुन र केसर वा गिलासमा रंग थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, वेग १। हामी नुन बिन्दु जाँच गर्दछौं। हामी भित्र आराम गरौं2मिनेट कभर गिलास। हामी सेवा गर्छौं।
चामलको बाँकी दुई मिनेटको समयमा, मैले झींगा ग्रील र शीर्षमा नुन फ्लेक्स थपेको छु।
थप जानकारी- फूलगोभी क्रिम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, माछा
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » झींगाको साथ क्रीमयुक्त चामल
नमस्कार इरेन। मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मन पर्छ! ब्लग को लागी धेरै धन्यवाद। मेरो श्रीमान् र म उहाँ बिना के गर्नुहुने थियो! एउटा प्रश्न: यदि म खैरो चामलको साथ यो स्वादिष्ट चामल बनाउन चाहान्छु: के समय परिवर्तन हुन्छ? र मात्रा? धेरै धेरै धन्यवाद!
मोनकाबालेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! रकम समान राख्न सकिन्छ, तर शोरबको १०० मिलि बढी थप्नुहोस्। यद्यपि, म सुझाव दिन्छु कि तपाईले निर्माताको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्, किनकि यसले खरिद गरेको खैरो चामलको बिभिन्नतामा निर्भर हुन सक्छ। जे भए पनि जब तपाईंसँग प्याकेज छ, यदि तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् भने मलाई फेरि लेख्नुहोस्, ठीक छ? र मलाई भन्नुहोस् यो तपाईंलाई कसरी फिट गर्दछ !! एक राम्रो चुम्बन।
इसाबेल एन्ड्रेस भन्यो
अति उत्तम चामल, मेरो छोराले मलाई भन्यो कि अबदेखि उनी यो मात्र खान चाहन्छन्। धन्यवाद रेसिपी को लागी धेरै धन्यवाद र तपाईले प्रकाशित गर्नु भएको सबै चीज रमाईलो छ।
इसाबेल एन्ड्रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले मलाई कस्तो आनन्द दिनुभयो! र तपाईंको छोराको शब्दहरू अद्भुत छन्। तपाईंको टिप्पणीले मलाई धेरै खुशी बनायो। हामीलाई लेख्न र हाम्रो ब्लग अनुसरण गर्न को लागी धेरै धेरै धन्यबाद। एक विशाल चुम्बन।
नमस्ते इरेन, मैले भर्खर यो विधि पत्ता लगाए र यो एकदमै अचम्म देखिन्छ! यस सप्ताहअन्तमा म प्रमाणित गर्नेछु कि मसँग पाहुनाहरू छन् तर म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि people व्यक्तिको लागि हामीले थप समय दिनुपर्नेछ।
नमस्कार आना, चामलको व्यंजनहरुमा तपाईले मात्र परिमाण परिमार्जन गर्नुपर्नेछ तर कहिले होइन। तिमीले मलाई कसरी भन्यौ !! चुम्बन र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद।
वास्तवमै अति उत्तम दयाको कुरा जुन दोहोरिन मिल्दैन !!
तपाईको सन्देश अल्मुडेनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद! म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु कि धेरै खुशी छु 🙂
कस्तो खुशी! तपाईलाई मन परेकोमा म धेरै खुसी छु। तपाइँको सन्देश को लागी धन्यवाद 😉
एउटा प्रश्न ... बजारमा झींगा र झींगे धेरै आकारका रूपमा छन्, हामीले कुन अनुमानित वजन प्रयोग गर्नुपर्दछ? 300 ग्राम? Grams०० ग्राम? के त्यो पक्कै हो, सानो आकार अतिरिक्त ठूलो आकारको जस्तो छैन ...।
नमस्ते पालोमा, तपाईले भनेको कुरा बिल्कुलै रोक्नको लागि, कि कहिलेकाँही तपाई बजारमा जानुहुन्छ र ती विशाल वा सानो हुन्छन्, म के गर्छु उसको आकार अनुसार व्यक्ति प्रति टुक्राहरूको संख्या हिसाब गर्नु हो। मेरो केसमा, ती व्यक्तिहरूसँग ठूलो भएकाले हामीले प्रति व्यक्ति sp लाई छोड्नुपर्थ्यो, ध्यानमा राख्नुहोस् कि मुख्य थाल भात हो, झोला होईन। मलाई आशा छ कि मैले तपाईंलाई मद्दत गरेको छु 🙂 त्यसैले यदि तिनीहरू मध्यम छन् भने म प्रति व्यक्ति4​​राख्छु र यदि तिनीहरू प्रति व्यक्ति साना6छन्, यद्यपि तपाईंले झींगाको लागि सोध्नुभयो भने, तिनीहरू सामान्यतया धेरै ठूलो हुन्छन्। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुनेछ!
सत्य यो हो कि तिनीहरू थप ठूला छन्, एक किलोमा तिनीहरू केवल १ fit फिट छन्। म यो कसरी देख्नको लागि केवल आधा राख्न लागिरहेको छु, म स्टक अति शक्तिशाली बाहिर आउन चाहन्न। मा तिमीलाई भन्छु। धन्यबाद सुन्दरी! 🙂
पालोमा कस्तो थियो? जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नु भयो कि स्टक एकदम केन्द्रित छ भने तपाईले अधिक पानी थप्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको मनपर्दो नभएसम्म र यसलाई कांचको जारमा स्थिर गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाईंसँग अन्य चामलको भाँडा वा माछा सूप बनाउनको लागि पहिल्यै तयार पारिएको पाउनुहुनेछ। अंगालो!
सत्य यो हो कि यो कल्पनिक थियो, मैले चाखेर पाएको चामलको भाँडामध्ये एक हो। People व्यक्तिको लागि अलि अभाव, मलाई लाग्छ कि अर्को पटक म मात्रा बढाउँछु किनकि टीएम glass गिलास टीएम than१ भन्दा ठूलो छ, जुन थर्मोमिक्सका लागि हो कि नुस्खा डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले हामी दोहोर्याउन सक्छौं! 😉
नमस्कार इरेन! 🙂
तपाइँ यस प्रकारको भातको किसिमको सिफारिश गर्नुहुन्छ?
नमस्ते पाब्लो, एक राउन्ड राइस (जस्तो कि प्याला जस्तो छ) पर्याप्त भयो। म ब्रान्ड परिवर्तन गर्दैछु, त्यसैले तपाईले ख्यालमा लिनुपर्ने केवल चीज भनेको ब्रान्डले संकेत गरेको खाना पकाउने समय हो। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ! हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद 🙂
नमस्ते मलाई व्यंजनहरू मनपर्दछ र मैले यो तीन पटक गरेको छु, मेरा बच्चाहरूले यो धेरै मन पराउँछन्।
म Toñi चकित छैन .. ऊ स्वादिष्ट हो!
स्वादिष्ट चावल, यद्यपि people व्यक्तिको लागि अलि अभाव छ। रसिदको लागि धेरै धेरै धन्यबाद!
धन्यवाद !! याद गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको रुचिमा मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ, तर सधै समान समय राख्नुहोस्। अभिवादन !!
मसँग months महिनाको लागि थर्मोमिक्स रहेको छ र म भन्न सक्दछु कि मैले पकाएको सबैभन्दा उत्तम नुस्खाको मितिसम्म। एक ठूलो सफलताका साथै सजिलो र छिटो। अर्को पटक पनि कम समय लिन मसँग पहिले नै अतिरिक्त स्थिर फ्रिज छ।
कस्तो राम्रो Iker! अवश्य पनि मेरो लागि यस चामल भव्य र मेरो मनपर्ने मध्ये एक हो। घरमा हामी यसलाई धेरै तयार गर्दछौं र हामीसँग पाहुनाहरू भएपछि यो सुरक्षित शर्त हो! तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद। म पनि राम्रो मात्रामा स्टक बनाउनको लागि अवसर लिन्छु, यसलाई स्थिर गर्नुहोस् र यसलाई पछिल्लो समयको लागि तयार पार्नुहोस् 🙂 ठूलो आलिंगन !!
स्वादिलो ​​र बनाउन सजिलो।
धन्यवाद क्यारोलिना! 🙂
नमस्ते, तपाईको ब्लगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नुस्खा मा "8 झींगा को शरीर" थप्न र पीस गर्न भनिएको छ। के तिनीहरू झींगा हुन् वा यो गलत छाप हो र हामी 8 मध्ये 16 झींगा पीस्छौं। मेरो प्रश्न आउँछ किनभने यसले सामग्रीमा झींगा राख्दैन। अभिवादन।
नमस्ते जोकानु, हो वास्तवमा तिनीहरू झींगा होइनन् तर झींगा हुन्, यो एउटा गलत प्रिन्ट हो जुन हामीले भर्खर सुधार गरेका छौं। १ 8 प्रण मध्ये 16 काटिएको छ - लेख्न को लागी धन्यवाद !!
नमस्कार !! मलाई थाहा छैन मैले कति पटक यो नुस्खा बनाएको छु तर हामी यसको लागि पर्याप्त हुन सक्दैनौं। अति उत्तम!!। मेरा बच्चाहरू भन्छन कि यो उनीहरूले खाएको उत्तम चामल हो र धेरैले प्रयास गरेका छन् किनभने मलाई यो सप्ताहन्तमा गर्न मन पर्छ।
केवल एक श doubt्का, तपाईले राख्नु भएको सामग्रीहरूमा यसले 750० जीआर पानी प्रयोग गर्दछ तर स्टक तयार गर्दा तपाई 900 ००० जीआर देखाउनुहुन्छ। जब म यो गर्छु, कुनै शोरप वाष्पीकरण हुँदैन र म बिल्कुल उस्तै वजन प्राप्त गर्छु जुन मैले राखेको छु। कुन दुई परिमाणहरू सहि छन्? म यसको स्वाद अधिक केन्द्रित गर्न 750 sometimes० को साथ गर्छु र कहिलेकाँ rice ०० बढी चामल थप्न तर मलाई सँधै सन्देह हुन्छ।
अवश्य पनि, यो चार व्यक्तिहरूको लागि धेरै छोटो हो र यो हेर्नुहोस् कि दुई बच्चाहरू छन् ... वा यो हामी यसलाई प्रेम गर्दछौं र हामी दोहोर्याउन चाहन्छौं, हे।
नमस्कार बिट्रिज, तपाईको टिप्पणीको लागि लाखौं धन्यबाद !! सत्य यो हो कि यो ब्लगमा सबैभन्दा सफल व्यंजनहरू मध्ये एक हो ... र मेरो साथीहरूको घरमा! ठिक छ, तपाईंले उल्लेख गरेको श्रोन किन यो वाष्पीकरणको समयमा र शोरबा तान्नमा हराउने गर्दछ, तर यो हुन सक्छ कि यो त्यति वाष्पीकरण हुँदैन। मेरो सल्लाह यो सबै बाहिर फेंक छ। वास्तवमा यो राम्रो बिन्दु हो त्यसैले मँ तपाईका निर्देशनहरू पछ्याउँदै अहिले पाठ परिमार्जन गर्न गइरहेको छु। तपाईं अधिक मात्रा थप्न सक्नुहुन्छ र or वा serv सर्वि forहरू पकाउन सक्नुहुन्छ यदि short छोटो भयो भने। तपाईले चामल र बोटको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ, तर चामलको पकाउने समय पनि त्यस्तै हुनेछ, ठीक छ? तिमी मलाई कस्तो छौ भनेर भन!
एउटा ठूलो चुम्बन र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद
मैले यो दुई चोटि गरिसकें र यो प्यासी छ। मलाई थाहा छैन किन, राम्रो स्वादको साथ, तर पास्ति, डढेको होइन। अधिक शोरबा द्वारा?
नमस्ते जेएम, यो चामल महमाउ छ, त्यसैले स्थिरता कडा हो तर क्रीमियर हुनेछैन। जे भए पनि, यदि तपाइँ यो सुसंगततामा हल्का चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले खाना पकाउने समयमा केवल २०० ग्राम ब्रोथ थप गर्नुपर्नेछ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
मँ समुद्री खाना ब्रोथ चामलको लागि यो नुस्खा छोड्न सक्छु, जुन तपाईलाई पक्कै मनपर्नेछ किनकि यो वास्तवमै शोरबासँग रहन्छ। https://www.thermorecetas.com/arroz-caldoso-de-marisco/ मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!! तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। अंगालो
च्याउ र लसुन र ह्यामले भरिएको
टोफूको साथ टमाटर क्रीम